एप्पलले आईओएस १ | मा फेसटाइमको साथ हाम्रो लुकको सुधार थप्यो आईफोन समाचार
एप्पलले आईओएस १ in मा फेसटाइमको साथ हाम्रो लुक सुधार गर्दछ
धेरै जसो धेरै उपलब्ध अनुप्रयोगहरूको प्रयोग गरी भिडियो कन्फरेन्स गरेको जो कोहीले ध्यान दिएका छन कि वार्तालापकर्ता तपाईंको अनुहार हेरिरहेका छैनन्, सबै थोरै बिग्रिएको टकटकीको साथ देखा पर्दछ, सामान्यतया केहि ईन्च तल। किनभने हामी कसैसँग कुरा गर्दा हामी उनीहरूको अनुहार हेर्छौं, र क्यामेरामा हेर्दैनौं जुन हामीलाई केही सेन्टिमिटर माथि रेकर्ड गर्दछ।
ठिकै छ, आईओएस १ Apple मा एप्पलले यो समाप्त गर्न चाहेको थियो, र यो तेस्रो बिटा जुन केवल २ about घण्टाको लागि हामीसँग रहेको छ, यसले एक नयाँ विकल्प जोडेको छ, जसले भिडियो कलको विश्वलाई परिवर्तन गर्दैन, तर यसले बनाउनेछ परिणाम राम्रो हुन्छ, विशेष गरी जब तिनीहरू रेकर्ड गरिन्छ र यूट्यूब जस्ता अन्य मिडियामा प्रकाशित हुन्छन्। अबदेखि हाम्रो वार्तालापहरूको टकटकीले हामीमा सीधा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, यो कस्तो हुनुपर्दछ।
एप्पलले यसलाई "फेसटाइम एटेंशन सुधार" कल गर्‍यो र यो विकल्प आईओएस १ 13 सेटिंग्स भित्र फेसेटाइमको अनुभागमा उपलब्ध छ। यस क्षणमा एप्पलले हामीलाई यो सुविधा सक्रिय वा निष्क्रिय गर्न अनुमति दिन्छ, किनकि केही प्रयोगकर्ताहरूलाई यो नयाँ विकल्प मनपर्दैन। यो सक्रिय भएपछि हामी हाम्रो कुराकानीको अनुहार हेर्न सक्छौं, र उनले याद गरे कि हामी वास्तवमै उसलाई हेरिरहेका छौं। हामीलाई थाहा छैन कि एप्पलले कसरी यो नतीजा प्राप्त गर्दछ, तर तपाईले केवल फोटो हेरेर हेर्नुपर्नेछ जुन लेखको हेड हुन्छ र तपाईले देख्नुहुनेछ कसरी दाँयामा भएको छवि तपाईलाई हेर्छ, बायाँमा नभई।
के यसले समूह कलहरूको लागि काम गर्दछ? के यो म्याकोस क्याटालिनामा पनि उपलब्ध हुनेछ? अरूलाई यो नयाँ विकल्पको प्रतिलिपि गर्न कत्ति समय लाग्नेछ? के एप्पलले स्काईप जस्ता अन्य अनुप्रयोगहरूलाई यसको प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ? हामीले यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन पर्खनु पर्नेछ, तर अहिलेका लागि, हामी जोसँग आईओएस १ have छ हाम्रो फेस टाईम कलहरूका लागि यस सुविधालाई सक्रिय गर्न सक्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS 13 » एप्पलले आईओएस १ in मा फेसटाइमको साथ हाम्रो लुक सुधार गर्दछ
के आईफोन ११ मा USB सी कनेक्टर छ? आईओएस १ in मा एक स्क्रिनशट बताउँछ कि यो हुन सक्छ
डा। मारियो वर्ल्ड को लागी नयाँ ट्रेलर जहाँ उनीहरुले हामीलाई मल्टिप्लेयर मोड देखाउँछन्